Kun waraana ifaa tahe Oromoota irratti banuu dha. Murtee siyaasaatiin akka godhame ifa gala. – Kichuu
HomeAfaan OromooTVKun waraana ifaa tahe Oromoota irratti banuu dha. Murtee siyaasaatiin akka godhame ifa gala.
Kun waraana ifaa tahe Oromoota irratti banuu dha. Murtee siyaasaatiin akka godhame ifa gala.
Tarkaanfiin kun amma dura bara TPLF iyyuu tahee hin beeku. Yeroo kanatti tahuun isaa ammoo hidhaa fi ukaamsaa Oromoo irratti godhamaa jiruun kan wal qabatu tahuu isaati. Jimaan madda dinagdee Oromoo akka tahe Itoophiyaa keessatti beekama. Oromoo bira dabreeyyuu akkuma buna keenyaatti Itoophiyaan alatti ergattee sharafa ittiin hammaarratti. Jimaa irratti duuluun Oromoo siyaasaadhaan itti duulaa jiran dinagdeedhaanis dugda cabsuuf karoorri akka jiru agarsiisa. Tarkaanfii guyyaa tokkootiin jimaa qarshii miliyoonotatti herregamu barbadeessan. Daldaltoota qofa osoo hin taane qotee bultoota omishtoota jimaas kasaarsuu fi gabaa isaanii cufuu barbaaduu mul’isa. Bixiginnaan diina Oromooti yeroo jennu kun ragaa guddaa tokko. Sirna hamtuu kanaaf obsa qabaachuun of ganuu dha!
Kun waraana ifaa tahe Oromoota irratti banuu dha. Murtee siyaasaatiin akka godhame ifa gala. Tarkaanfiin kun amma dura bara TPLF iyyuu tahee hin beeku. Yeroo kanatti tahuun isaa ammoo hidhaa fi ukaamsaa Oromoo irratti godhamaa jiruun kan wal qabatu tahuu isaati. Jimaan madda dinagdee Oromoo akka tahe Itoophiyaa keessatti beekama. Oromoo bira dabreeyyuu akkuma buna keenyaatti Itoophiyaan alatti ergattee sharafa ittiin hammaarratti. Jimaa irratti duuluun Oromoo siyaasaadhaan itti duulaa jiran dinagdeedhaanis dugda cabsuuf karoorri akka jiru agarsiisa. Tarkaanfii guyyaa tokkootiin jimaa qarshii miliyoonotatti herregamu barbadeessan. Daldaltoota qofa osoo hin taane qotee bultoota omishtoota jimaas kasaarsuu fi gabaa isaanii cufuu barbaaduu mul’isa. Bixiginnaan diina Oromooti yeroo jennu kun ragaa guddaa tokko. Sirna hamtuu kanaaf obsa qabaachuun of ganuu dha!
የመንግስት ታጣቂዎች አዳማ ላይ በፈፀሙት እገታ የጫት ነጋዴዎች ሚሊዮን ብሮችን ከሰሩ::
ከሀረርጌ የተለያዩ ቦታዎች ትጭኖ በ15 ይጭነት መኪና ወደ ፊንፊኔ ሲጏዝ የነበር በሚሊዮኖች የሚቆጠር ዋጋ ያለዉ ጫት አደማ ላይ የምንግስት ታጣቂዎች ተይዞ መራገፍ ከነበረበት ወቅት እንዲዘገይ ስለተደርገ ሙሉ በሙሉ ተበላሽቷል:: በዚህም ምክንያት እጅግ ብዙ ኪሳራ እንደገጠማቸዉ ነጋዴዎች ተናግረዋል::
“የመዉጫ ትኬት ቆርጠን ቀረጥ የከፈልንበት ትኬት ብናሳይም የምንግስት ታጣቂዎች ሊያዳምጡን አልቻሉም:: የንግድ ፈቃድ ሆነ አስፈላጊ ሰነዶች ቢኖሩንም ይህን የመሰለ ኪሳራ በመንግስት ታጣቂዎች ደርሶብናል:: እንደሚቃጠል/እንደሚበላሽ/ በልመና ጭምር ብናስርዳ ህዝባዊ ወገንተኝነት ስላሌቸዉ በእምቢታቸዉ ለከባድ ኪሳራ ዳርገዉና” ያሉት ናጋዴዎቹ, “ሰዓቱ ካለፈ ቦኃላ ከከጠዋቱ 1:45 ላይ እንድንሄድ ቢፈቅዱልንም የማራገፊያዉ ሰዓት ስለረፈደ እና መንገድም የሚዘጋጋበት የጠዋት ስራ መግቢያ ሰዓት ስለሆነ ንብረታችን እንዲህ ተበላሽቷል”
Hard facts : When Chauvinists cannot hide their hypocrite culture. Dr. Dagnachew Assefa is the ABIYI adviser who once aggressively attacked Shimelis Abdisaa for being OROMO Nationalist but today he advocating for Ahmara nationalism and declare a war on Tigrai . Does this man fit for PM adviser ??.
ዋና ጠቅላይ ዓቃቤ ሕግና የንግድ ባንክ ፕሬዚዳንት ከኃላፊነታቸው ተነስተው የአምባሳደርነት ሹመት ተሰጣቸው